Ngincome ukuthi abhale nge-journalism. Izintatheli zingabantu abanamakhono amahle futhi abanesibindi. Bakha izindaba zabo ngokuhamba kwesikhathi, ngokuzikhandla okukhulu futhi bemba ukuthola amaqiniso. Yize ama-blogger enza izindaba ngezikhathi ezithile ngokuba yinja yokubuka, angikholwa ukuthi kukhona nedlanzana elingalingana nethalente izintatheli elinazo - hhayi ekubhaleni kuphela, kepha ezihamba odakeni ukuze zifike eqinisweni.
Uma ezinye izintatheli zingabelana ngolwazi lwabo lobuciko babo nge-blog - futhi nokuqonda okuthile ukuthi yiziphi izindaba abasebenza kuzo - futhi banikeze amathuba okuqeqesha nokubhalisa ama-blogger, kungaba nethemba lokuthi iFourth Estate izohlala kuyo. Ngiyethemba ukuthi uzoyiqala ibhulogi futhi aqale ukufundisa yonke enye indawo ye-blogosphere ukuthi singaba kanjani abaqaphi abangcono.
Umhlaba owesabekayo ngaphandle kweFourth Estate. Kusobala ukuthi imithombo yethu yezindaba ejwayelekile ishiye isikhundla sayo ezinyangeni eziningi ezedlule njengezimpawu zamadola, abaninimasheya, kanye nethonya lezepolitiki okudlule ukubaluleka kobuntatheli obukhulu. Ngangikhona lapho siqala ukukhangisa leli phephandaba ngokuthi mangaki amakhuphoni ayekulo hhayi izintatheli ezinethalente onikezwe ukufinyelela kuzo.